IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 1 - Amaphakethe amaBeroean - Umbuyekezi weJW.org
by UTadua | Septhemba 8, 2020 | Izimfundiso ZeBhayibheli, UGenesise - Ngabe Kuyiqiniso? | 1 amazwana
Kungani Kubalulekile? Ukubuka konke
Lapho umuntu ekhuluma ngencwadi yeBhayibheli kaGenesise emndenini, kubangani, ezihlotsheni, kubantu asebenza nabo, noma kubantu abajwayelene naye, ngokushesha umuntu uyabona ukuthi iyisihloko esidala impikiswano enkulu. Kungaphezulu kakhulu kweziningi, uma kungenjalo zonke ezinye izincwadi zeBhayibheli. Lokhu kusebenza futhi noma ngabe labo okhuluma nabo bangaba nokholo olufana nolwakho njengolwakho, ingasaphathwa eyokuthi banenkolo ehlukile yobuKrestu noma bangamaMoslem, amaJuda noma ama-agnostic noma abakholelwa kuNkulunkulu.
Kungani iphikisana kangaka? Akungenxa yokuthi ukubona kwethu izehlakalo ezilotshwe lapho kuthinta umbono wethu wezwe nesimo sethu sengqondo ngempilo nokuthi siyiphila kanjani? Kuphinda futhi kuthinte umbono wethu wokuthi abanye kufanele baphile kanjani nezimpilo zabo. Ngakho-ke, kuzo zonke izincwadi zeBhayibheli kubalulekile ukuthi sikuhlolisise okuqukethwe yilo. Yilokho uchungechunge oluthi “The Bible Book of Genesis - Geology, Archaeology, and Theology” luyozama ukukwenza.
Kusho ukuthini uGenesise?
“UGenesise” empeleni igama lesiGreki elisho ukuthi “umsuka noma indlela yokwakheka kwento ethile ”. Kubizwa “Bereshith”[i] ngesiHeberu, okusho "Ekuqaleni".
Izihloko ezihlanganiswe kuGenesise
Cabanga ngezinye zezihloko ezikhulunywa yilencwadi yeBhayibheli kaGenesise:
Umsuka Nokubakhona Kwemimoya Emibi
Indaba kaZamcolo Womhlaba Wonke
Umsuka wamaqembu ezizwe - Uhlu Lwezizwe
Ukholo nohambo luka-Abrahama
Ukwahlulelwa kweSodoma neGomora
Umsuka wabantu abangamaHeberu noma bamaJuda
Ukuphakama kwamandla eGibhithe kwesigqila esingumHeberu, uJoseph.
Iziprofetho zokuqala eziphathelene noMesiya
Ngaphakathi kwalokhu kulandisa kuneziprofetho eziphathelene noMesiya ezazizofika bese ziletha izibusiso esintwini ngokuguqula ukufa okwakulethwe ekuqaleni kokuphila kwesintu. Kukhona nezifundo ezicacile zokuziphatha nezokusiza ezihlokweni eziningi.
Ingabe amaKristu kufanele amangazwe yile mpikiswano?
Cha, ngoba kunokuthile okuhambisana kakhulu nengxoxo yonke yale micimbi. Kubhalwe ku-2 Peter 3: 1-7 njengesixwayiso kumaKrestu kokubili ngenkathi kubhalwa ngekhulu lokuqala kuya phambili.
Amavesi 1-2 afundwe “Ngivusa amandla enu okucabanga acacile ngendlela yesikhumbuzo, 2 ukuthi kufanele niwakhumbule amazwi akhulunywa ngaphambili ngabaprofethi abangcwele nomyalo weNkosi noMsindisi ngabaphostoli benu. ”
Qaphela ukuthi inhloso yala mavesi kwakuyisikhumbuzo esimnene kumaKristu ekhulu lokuqala nakulabo ababezoba ngamaKristu kamuva. Isikhuthazo bekungafanele sicwilise ukungabaza imibhalo yabaprofethi abangcwele namazwi kaJesu Kristu njengoba adluliswa ngabaphostoli abathembekile.
Kungani lokhu kwakudingeka?
Umphostoli uPetru usinikeza impendulo emavesini alandelayo (3 & 4).
" 3 Ngoba niyakwazi kuqala lokhu, ukuthi ezinsukwini zokugcina kuyofika abahleka usulu ngokuhleka kwabo usulu, beqhubeka ngokwezifiso zabo 4 bethi: “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe? Phela, kusukela osukwini okhokho bethu abalala ngalo [ekufeni], zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo “.
Isimangalo sokuthi “zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo ”
Qaphela isimangalo sabahleki bosulu, “zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo ”. Kungenzeka futhi ukuthi laba bahleki bosulu bafuna ukulandela izifiso zabo, kunokuba bamukele ukuthi kunegunya lokugcina likaNkulunkulu. Vele, uma othile amukela ukuthi kunegunya lokugcina, lapho-ke kuba yisibopho kubo ukuthobela lelo gunya lokugcina likaNkulunkulu, kodwa-ke, lokhu akuthandi wonke umuntu.
Ngezwi lakhe uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi ufuna silalele imithetho embalwa asibekela yona ukuze sizuze, manje nasesikhathini esizayo. Kodwa-ke, abahleki bosulu bayozama ukudambisa ukuzethemba abanye abangase babe nakho ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu esintwini zizogcwaliseka. Bazama ukungabaza ukuthi uNkulunkulu uyozigcwalisa izithembiso zakhe. Nathi namuhla singathinteka kalula kulolu hlobo lokucabanga. Singakukhohlwa kalula lokho okwabhalwa ngabaprofethi, futhi, futhi singancengwa ngokucabanga ukuthi labososayensi banamuhla abadumile nabanye bazi okuningi kakhulu kunathi futhi yingakho kufanele sibethembe. Kodwa-ke, ngokusho koMphostoli uPeter lokhu kungaba iphutha elikhulu.
Isithembiso sokuqala sikaNkulunkulu esilotshwe kuGenesise 3:15 sasiphathelene nochungechunge lwezehlakalo ezazizoholela ekuhlinzekweni komenzeli [uJesu Kristu] okwakungakwazi ukuguqula imiphumela yesono nokufa kuso sonke isintu, okwakukhona zilethele yonke inzalo yazo isenzo sobugovu sokuhlubuka esenziwa u-Adamu no-Eva.
Abahleki bosulu bazama ukufaka ukungabaza ngalokhu ngokuthi “zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo “, Ukuthi akukho okwehlukile, nokuthi akukho okwehlukile, nokuthi akukho okuzohluka.
Manje sesithinte kafushane okuncane kweTheology noma evela kuGenesise, kepha ngabe iGeology ingena kuphi kulokhu?
I-geology ivela kumagama amabili esiGreki, "Ge"[Ii] okusho ukuthi “umhlaba” kanye no “logia” okusho “ukutadisha”, ngakho-ke 'isifundo somhlaba'.
Imivubukulo - Iyini?
Imivubukulo ivela kumagama amabili esiGreki “Arkhaio” okusho “ukuqala” futhi “logia”Okusho ukuthi“ ukutadisha ”, ngakho-ke 'isifundo sokuqala'.
Imfundiso yenkolo - iyini?
Imfundiso yenkolo ivela kumagama amabili esiGreki “Theo” okusho ukuthi “uNkulunkulu” nokuthi “logia”Okusho ukuthi“ ukutadisha ”, ngakho-ke 'isifundo sikaNkulunkulu'.
I-geology - Kungani kubalulekile?
Impendulo ikuyo yonke indawo. I-geology ingena ku-equation maqondana ne-akhawunti ye-Creation, nokuthi ngabe kwaba khona uzamcolo womhlaba wonke.
Ngabe umthetho ocashunwe ngezansi, owemukelwa yizazi eziningi zeGeologist, awuzwakali ufana ncamashi nalokho uMphostoli uPetru athi abahleka usulu bazokufuna?
“I-Uniformitarianism, eyaziwa nangokuthi yi-Doctrine of Uniformity noma i-Uniformitarian Principle, yiyona ukucabanga ukuthi imithetho efanayo yemvelo nezinqubo ezisebenza ekubhekweni kwethu kwesayensi kwanamuhla bekulokhu kusebenza endaweni yonke esikhathini esidlule futhi kusebenza yonke indawo endaweni yonke. ”[Iii](ngesibindi bakithi)
Empeleni abasho yini ukuthi “zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashi nokusuka “ the “Ukuqala“Kwendawo yonke?
Isilinganiso siqhubeka sithi “Noma kungenakuphikiswa ukubeka lokho akunakuqinisekiswa kusetshenziswa indlela yesayensi, abanye bacabanga ukuthi ukufanelana kufanele kube yinto edingekayo isimiso sokuqala ocwaningweni lwesayensi. Abanye ososayensi abavumelani futhi bacabanga ukuthi imvelo ayihambelani ngokuphelele, noma ngabe ikhombisa ukufana okuthile. "
"Ku geology, i-uniformitarianism ifake i- kancane kancane umqondo wokuthi “isikhathi samanje siyisihluthulelo sesikhathi esedlule” nokuthi izehlakalo zokwakheka komhlaba zenzeka ngesilinganiso esifanayo manje njengoba bezilokhu zenzeka, yize izazi zesayensi yokwakheka komhlaba eziningi zanamuhla zingasabambeleli ku-gradualism eqinile. Kwenziwe ngu UWilliam Whewell, ekuqaleni kwahlongozwa ngokungafani ne- inhlekelele ngabaseBrithani izazi zemvelo ngasekupheleni kwekhulu le-18, kuqala ngomsebenzi we isazi sokuma komhlaba UJames Hutton ezincwadini zakhe eziningi kubandakanya Umbono Womhlaba. Umsebenzi kaHutton kamuva walungiswa ngusosayensi UJohn Playfair futhi yenziwa yaziwa yisazi sokuma komhlaba UCharles Lyell'S Izimiso zeGeology e 1830. Namuhla, umlando womhlaba uthathwa njengenkqubo ehamba kancane, ehamba kancane, enezikhathi ezithile ezehlisayo zemvelo ”.
Ngokukhuthaza ngamandla lokhu “inqubo ehamba kancane, efakwa ngezikhathi ezithile eziyinhlekelele yemvelo ” umhlaba wesayense uthuke inhlamba nge-Creation in the Bible, wayifaka esikhundleni somqondo we-Evolution. Kubuye kwathela nokuhlekisa ngomqondo wesikhukhula somhlaba wonke sesahlulelo ngokungenelela kukaNkulunkulu ngoba kuphela "Izenzakalo ezithile zemvelo eziyinhlekelele" ziyamukelwa futhi kusobala ukuthi, isikhukhula somhlaba wonke asisiwona umcimbi wemvelo onjalo oyinhlekelele.
Izinkinga ezivela ekuqhamukeleni kwezinkolelo-mbono kuGeology
KumaKristu, lokhu bese kuqala ukuba yinkinga ebucayi.
Umbono wesayensi wanamuhla?
noma inguqulo eguquliwe yokulandisa kweBhayibheli ukuze ivumelane nombono wesayensi ovamile?
noma ukulandisa kweBhayibheli kwendalo yaphezulu nokwahlulela kukaNkulunkulu, ngokukhumbula “Amazwi akhulunywa phambilini ngabaprofethi abangcwele nomyalo weNkosi noMsindisi ngabaphostoli benu"
UJesu, uZamcolo, iSodoma, neGomora
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma amaKrestu amukela amarekhodi amaVangeli, futhi amukela ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, noma ngabe kunjani ukuqonda abanakho mayelana nesimo sikaJesu, irekhodi leBhayibheli likhombisa ukuthi uJesu wakwamukela ukuthi kwakukhona uzamcolo womhlaba wonke owathunyelwa njengesahlulelo saphezulu nokuthi iSodoma neGomora nazo zabhujiswa ngesahlulelo saphezulu.
Eqinisweni, wasebenzisa uzamcolo wosuku lukaNowa njengesiqhathaniso sokuphela kwesimiso sezinto lapho ebuya njengeNkosi ukuletha ukuthula emhlabeni.
KuLuka 17: 26-30 wathi "Ngaphezu kwalokho, njengoba nje kwenzeka ezinsukwini zikaNowa, kuyoba njalo nasezinsukwini zeNdodana yomuntu: 27 babedla, bephuza, amadoda eshada, abesifazane bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. 28 Ngokufanayo, njengoba kwenzeka ezinsukwini zikaLoti: babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha. 29 Kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma kwana umlilo nesibabule kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. 30 Kuyoba njalo nangalolo suku lapho iNdodana yomuntu izokwembulwa ”.
Qaphela ukuthi uJesu wathi impilo yayiqhubeka njengokujwayelekile kuwo womabili umhlaba kaNowa nezwe likaLoti, iSodoma, neGomora lapho kufika ukwahlulelwa kwabo. Kungaba okufanayo nasemhlabeni lapho kwembulwa iNdodana yomuntu (ngosuku Lokwahlulela). Umbhalo weBhayibheli ukhombisa ukuthi uJesu wayekholelwa ukuthi zombili lezi zenzakalo, okukhulunywe ngazo kuGenesise, zaziyiqiniso ngempela, hhayi izinganekwane noma ihaba. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi uJesu wasebenzisa lezi zehlakalo ukuqhathanisa nesikhathi sokwembulwa kwakhe njengeNkosi. Kuwo womabili uzamcolo wosuku lukaNowa kanye nasekubhujisweni kweSodoma neGomora, bonke ababi bafa. Okuwukuphela kwabantu abasinda osukwini lukaNowa kwakunguNowa, umkakhe, amadodana akhe amathathu nabafazi babo, bebonke abantu abayisishiyagalombili abalalela iziyalezo zikaNkulunkulu. Abasinda eSodoma naseGomora kuphela kwakunguLoti namadodakazi akhe amabili, futhi futhi labo babelungile futhi belalela iziyalezo zikaNkulunkulu.
Umphostoli uPetru, Ukudalwa, noZamcolo
Qaphela lokho uMphostoli uPetru aqhubeka nokukusho ku-2 Peter 3: 5-7,
"5 Ngoba, ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabaphunyuka, lokuthi ayekhona amazulu kusukela endulo nomhlaba omile ubumbene uphuma emanzini naphakathi kwamanzi ngezwi likaNkulunkulu; 6 futhi ngalezo zindlela izwe langaleso sikhathi labhujiswa lapho lambozwa ngamanzi. 7 Kodwa ngalelo zwi amazulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo futhi kubekelwe usuku lokwahlulelwa nolokubhujiswa kwabantu abangamhloniphi uNkulunkulu. ”
Uyachaza ukuthi kukhona iqiniso elibalulekile ukuthi laba bahleki bosulu abakushayi mkhuba ngamabomu, “Ukuthi ayekhona amazulu kusukela endulo [kusukela endalweni] nomhlaba emi ubumbene uphuma emanzini naphakathi kwamanzi ngezwi likaNkulunkulu”.
Indaba kaGenesise 1: 9 isitshela ukuthi “Futhi uNkulunkulu waqhubeka wathi [ngezwi likaNkulunkulu], “Amanzi angaphansi kwamazulu mawaqoqelwe ndawonye futhi kuvele umhlaba owomile” [umhlaba ume ubumbene uphume emanzini naphakathi kwamanzi] Kwaba njalo ”.
Qaphela ukuthi u-2 Peter 3: 6 uqhubeka athi, “futhi ngalezo zindlela izwe langaleso sikhathi labhujiswa lapho limbozwa ngamanzi ”.
Lezo zindlela zazikhona
Ngakho-ke, ngabe kwakunguzamcolo wendawo kuphela, ngokusho koMphostoli uPetru?
Ukuhlolisiswa kombhalo wesiGreki kukhombisa okulandelayo: igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “izwe" “Kosmos”[Iv] okusho ukuthi ngokoqobo “okuthile oku-odwa”, futhi kusetshenziselwa ukuchaza “umhlaba, umkhathi; izindaba zomhlaba; abakhileyo emhlabeni “ ngokuya ngomongo ngqo. Ivesi 5 ngakho-ke likhuluma ngokusobala ngomhlaba wonke, hhayi nje ingxenye encane yawo. Lithi, “Umhlaba wangaleso sikhathi”, hhayi noma yiliphi izwe noma ingxenye yomhlaba, kunalokho kuhlanganisa konke, ngaphambi kokuqhubeka nokuxoxa ngomhlaba wesikhathi esizayo njengokuqhathanisa kwivesi 7. Ngakho-ke, kulo mongo elithi “kosmos” ngabe libhekisa kubantu umhlaba, futhi akuqondakali njengabantu nje bendawo yendawo.
Kwakuyi-oda lonke labantu nendlela yabo yokuphila. UPeter uqhubeka ngokufanisa uZamcolo nomcimbi wesikhathi esizayo ozobandakanya umhlaba wonke, hhayi nje ingxenye yawo encane eyenziwe endaweni. Impela, uma uzamcolo ubungekho emhlabeni wonke uPetru ubezofanela ukubhekiswa kwawo kuwo. Kepha indlela abhekise kuyo kuyo, ekuqondeni kwayo ibifanisa nokufana, nomhlaba wonke owedlule nezwe lonke elizayo.
Amazwi kaNkulunkulu uqobo
Asikwazi ukushiya le ngxoxo ngesikhukhula ngaphandle kokuma isikhashana ukubukeza lokho uNkulunkulu uqobo akusho lapho enikeza isithembiso kubantu bakhe ngomlomo ka-Isaya. Kubhalwe ku-Isaya 54: 9 futhi lapha uNkulunkulu uqobo uthi (ekhuluma ngesikhathi esizayo mayelana nabantu bakhe u-Israyeli) “Lokhu kufana nezinsuku zikaNowa kimi. Njengoba nje ngifungile ukuthi amanzi kaNowa ngeke esaphinda adlula kuwo wonke umhlaba[V], ngakho ngifungile ukuthi ngeke ngikuthukuthelele noma ngikusole. ”
Ngokusobala, ukuze siyiqonde ngokunembile incwadi kaGenesise, kudingeka futhi ukuthi sikhumbule wonke umongo weBhayibheli futhi siqaphele ukuthi singafundi embhalweni weBhayibheli izinto eziphikisana neminye imibhalo.
Inhloso yezihloko ezilandelayo ochungechungeni ukwakha ukholo lwethu ezwini likaNkulunkulu futhi ikakhulukazi incwadi kaGenesise.
Ungafisa ukubheka izindatshana ezedlule ngezihloko ezihlobene njenge
Ukuqinisekiswa Kwe-akhawunti KaGenesise: IThebula Lezizwe[vi]
Ukuqinisekiswa kweRekhodi kaGenesise kusuka kumthombo ongalindelekile [vii] - Izingxenye 1-4
Lokhu kubheka okufushane ku-akhawunti yokudala kusetha indawo yezindatshana ezizayo kulolu chungechunge.
Izihloko zezindatshana ezizayo kulolu chungechunge
Okuzohlolwa ezindatshaneni ezizayo zalolu chungechunge kuzoba umcimbi ngamunye omkhulu okulotshwe encwadini kaGenesise ikakhulukazi labo okukhulunywe ngabo ngenhla.
Ngokwenza kanjalo sizobhekisisa lezi zinto ezilandelayo:
Esingakufunda ekuhlolisiseni imibhalo yangempela yeBhayibheli nomongo wayo.
Esingakufunda ekuhloleni izinkomba zomcimbi kumongo weBhayibheli lonke.
Yini esingayifunda ku-Archaeology.
Yini esingayifunda Emlandweni Wasendulo.
Yiziphi izifundo nezinzuzo esingazithola ngokunengqondo emlandweni weBhayibheli ngokusekelwe kulokho esikufundile.
Okulandelayo ochungechungeni, izingxenye 2 - 4 - I-Akhawunti Yokudala ....
[vi] Bhekafuthi https://beroeans.net/2020/04/29/confirmation-of-the-genesis-account-the-table-of-nations/
[vii] Ingxenye 1 https://beroeans.net/2020/03/10/confirmation-of-the-genesis-record-from-an-unexpected-source-part-1/
Ingxenye 2 https://beroeans.net/2020/03/17/16806/
Ingxenye 3 https://beroeans.net/2020/03/24/confirmation-of-…ed-source-part-3/
Ingxenye 4 https://beroeans.net/2020/03/31/confirmation-of-the-genesis-record-from-an-unexpected-source-part-4/
← Qiniseka Ukuthi Uthole IqinisoAbezindaba, Imali, Imihlangano, Nami →
'Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ' - Ukuhlolwa KwemiBhalo - Ingxenye 1
Ithemba Lovuko - Isiqinisekiso SikaJehova Esintwini. Izisekelo Zethembiso - Ingxenye 1
Indima eyodwa ethokozisayo edlalwa nguZamcolo ukukhonza njengofakazi wezwi likaNkulunkulu. ENyakatho Melika, kunezindawo ezazimbozwe yiqhwa, nezindawo ezazingamboziwe. Izindawo lapho bekungekho izinguzunga zeqhwa zikhombisa ubufakazi besikhukhula. Uma umuntu edlula entshonalanga yeKansas, ngokwesibonelo, izici ezinkulu zomhlaba ziveza ukuthi waqoshwa kanjani ngamanzi oZamcolo ancipha. I-Ice Age uqobo kucatshangwa ukuthi ibangelwe ukwethuka okwabangelwa uZamcolo esimweni sezulu. Ukube i-Ice Age yenzeke emuva kudala, uZamcolo ubuzokwenzeka... Funda kabanzi "